Uganda oo ciidamo hor leh u direysa Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Uganda oo ciidamo hor leh u direysa Soomaaliya
Dalka ku yaal Bariga Afrika ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ciidammo ka tirsan AMISOM geeyey Soomaaliya bishii Maarso 2007.
UGANDA - Ugu yaraan 160 askari oo ka tirsan booliiska dalka Uganda, ayaa loo soo daabuli doonaa Soomaaliya, inta uusan dhamaan sanadkaan, sida ay booliska waddankaas xaqiijiyeen khamiistii.
Askartaan oo qeyb ka noqonaya, Hawlgallada nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, ayaa shalay oo ku beegneyd 14-ka Oktoobar, loo soo xiray tababar lix bilood ah oo degdeg ah, waxaa la filayaa in bisha December ay soo gaaraan Muqdisho.
Xukuumadda Kampala, ayaa cutubkii ugu horreeyay ee Booliis ah (FPU) oo ka tirsan AMISOM u dirtay Soomaaliya, bishii July 2012-kii, kadib markii ay horay u soo dirtay Ciidanka Difaaca Uganda (UPDF) 2007.
Ciiddanka Uganda waxay weli yihiin askarta ugu badan Hawlgalka AMISOM, waxayna ka howlgalaan Sector 1 oo ka kooban Banaadir (Muqdisho), Goballadda Sh/Dhexe iyo Sh/ hoose.
Inkastoo ciidamada Uganda ay horay madaxda dalalka caalamka ugu amaaneen doorka ay ka qaateen xasilinta Soomaaliya, haddana qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa inta badan ku boorriyay in Muqdisho laga saaro ciidamada qalabka sida.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, ayaa bilaawgii bishii hore, ku hanjabay inay suuragal tahay inuu go’aansado in Ciiddanka Uganda ee ka tirsan Howl-galka Nabad Ilaalinta (AMISOM) uu ka soo saaro Soomaaliya, sababo la xiriira is-maandhaafka Siyaasadeed ee ka jira dalka.
Museveni wuxuu sheegay in Soomaaliya ay hareeyeen muranno iyo is -qabqabsi u dhexeeya madaxda, taas oo uu ku tilmaamay "AIDS siyaasadeed", (“political AIDS”).